Shil dayuuradded oo ka dhacay Kenya - BBC News Somali
Shil dayuuradded oo ka dhacay Kenya
Image caption George Saitoti
George Saitoti waxa uu ahaa siyaasi taariikh dheer ku leh dalka kenya. Waxaa uu muddo 13 sanno ah madaxweyne kuxigeen ka ahaa xukuumaddii madaxweynihii hore ee Daniel Arap Moi.
Waxa uuna qabtay xilal kala geddisan oo dhinaca golaha wasiirada ah.
Waxa uu ka mid ahaa siyaasiyiinta ugu cad cad ee ku haminayey in ay isu soo sharraxaan jagada madaxweynanimo marka uu dhammaado xilliga madaxweynaha haatan xilka haya ee Mwai Kibaki.
George Saitoti, waxa uu sanooyinkii ugu dambeeyey ahaa wasiirka Ammniga Gudaha, iyadoo waayadan dambe xaaladda ammaanka cabsi laga muujinayey.
Qaraxyo dhowr ah ayaa ka dhacay Kenya kaddib markii ay ciidammadda Kenya galeen Soomaaliya dabayaaqadii sanadkii tegay, wasiirkii Ammniga George Saitoti waxaa uu marar badan ku eedeeyey kooxda al Shabaab in ay ka dambeeysay weeraradaas.
Ku-xigeenkiisa Wasaaradda Amminiga Qaranka Orwa Ojode oo isaguna ku dhintay shilkan diyaaradeed ayaa waxaa uu hadda kahor baarlamaanka ka sheegay in Kenya ay la dagaallamayso wax uu ugu yeeray mas weyn oo madaxiisu uu yaalo xaafadda Eastleigh oo ah xaafadda ay Soomaalida ku badan tahay ee Nairobi seyntiisuna ku maqantahay buu yiri Soomaaliya.
Hadalkaas ayaa waxaa si kulul uga jawaabay qaar ka mid ah siyaasaiyiinta Soomaalida ah ee Barlamaanka ka tirsan.
Geeridda George Saitoti waxay noqotay mid dadka reer Kenya ay ka naxeen sababtoo ah doorkiisa siyaasadeed iyo sanooyinka badan ee uu ka dhaxmuuqday masraxa siyaasadda iyo in uu ka mid ahaa musharraxiinta shaaciyey in ay u tartami doonaan jagada ugu sarraysa dalka.
Da'diisu waxay ahayd 66 sanno.